ABSDF (NB) Killing Field : ကျနော် လူကက်ဆက် ပန်းချီ ထိန်လင်း | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« ABSDF Mass murderer Ronald @ Aung Naing
1992 press conference about ABSDF(NB) Massacre »
တလောက သန်းဂျီးမတွေ အကြောင်းရေးလိုက်တော့ တချို့လည်း သဘောတွေ့ကြ၊ တချို့ကလည်း ပူပန်ကြ အသံမျိုးစုံ ကြားခဲ့ရပါတယ်။ ဒီတခါတော့ တမျိုးပြောင်ပြီး “ပိုး” တွေအကြောင်း ရေးမယ် စိတ်ကူးမိပါတယ်။ ပိုးက ရိုးရိုးပိုးမျိုးမဟုတ်ပါဘူး ဂီတပိုး၊ အနုပညာပိုးများ အကြောင်းပါ။ သန်းဂျီးမတွေကို ရေနွေးတွေ ကြိုထားတဲ့ ဒယ်အိုးထဲ ထည့်လိုက်တော့ အားလုံးကြွကုန်ပေမယ့် ဒီအနုပညာပိုးက ရေနွေးအိုးထဲ ထည့်လည်း မသေ၊ လျှပ်စစ်နဲ့တို့လို့လည်း မသေ၊ အင်မတန် ချိုးရ နှိမ်ရ ခက်တတ်ပါတယ်။
နောက် အဆိုကောင်းတယောက်ကတော့ စမ်းချောင်း အခြေခံပညာသမဂ္ဂ ကျောင်းသားလေးဘ၀က တောခိုလာတဲ့ ဘိုဘို (ခေါ်) မိုးကျော်သူပါ။ ငယ်ငယ်လေးနဲ့ တောခိုလာလို့ လူတကာ ချစ်ကြတဲ့ ဘိုဘို တယောက်ဟာလည်း အသက်မသေရေး အတွက် ကျနော် NIP က ပါလို့ ထွက်ဆိုချက်ပေးပြီး အကျဉ်းသားဖြစ်လာရရှာပါတယ်။ ဘိုဘို ကျောင်းသားတပ်ဖွဲ့က တီးဝိုင်းမှာ ပင်တိုင်အဆိုတော်ဖြစ်ပြီး အခမ်းအနားတွေမှာ တော်လှန်ရေးသီချင်းတွေ အမြဲဆိုရတာမို့ ကျောင်သားတပ်ထဲက ကေအိုင်အေဘက်က မိသားစုတွေက အစ ချစ်ကြခင်ကြသူပါ။ သူတပါးကို အမြဲကူညီတတ်ပါတယ်။ သူက အမြဲတမ်း “သဘာဝရဲ့ရင်သွေးငယ်” သီချင်းကို ဆိုတတ်ပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ တညမှာတော့ အစောင့်တာဝန်ကျတဲ့သူက ဘိုဘိုရဲ့ သဘာဝရဲ့ရင်သွေးငယ် အပြီးမှာ ကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ သီချင်းတပုဒ်ကို ဆိုဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်။ ဘိုဘိုက ဒီသီချင်းတော့ မဆိုပါရစေနဲ့ အကိုရယ်ဆိုပြီး တောင်းပန်ပါတယ်။ အဲဒီလို အချီအချ ဖြစ်နေကတည်းက ဘိုဘို့ ဘေးမှာ ကပ်ပြီး လှဲအိပ်နေတဲ့ ကျနော့်စိတ်ထဲမှာ ပြဿနာတော့ စပြီဆိုတာ သိနေပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ဘိုဘိုဟာ မငြင်းသာတော့ဘဲ “ပျံသာပျံပါ ခွပ်ဒေါင်းနီ” ဆိုတဲ့ သီချင်းကို လွမ်းလွမ်းဆွတ်ဆွတ်နဲ့ စဆိုပါတော့တယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ ထွက်လာတဲ့ ဘိုဘိုရဲ့ သီချင်းသံကြောင့် ဒဏ်ရာကိုယ်စီနဲ့ မြေပေါ်မှာ မျက်နှာကို စည်းပြီး လှဲအိပ်နေကြရတဲ့ ကျနော်တို့အားလုံးဟာ စူးနစ်တဲ့ ဝေဒနာနဲ့အတူ သီချင်းစာသားတွေနောက်မှာ မျောပါနေပါတော့တယ်။
“… ပျံသာပျံပါ ခွပ်ဒေါင်းနီ မုန်တိုင်း မိုးသက်ချီ …” တဲ့။
ကျနော်တို့ဟာ ခွပ်ဒေါင်းနီသီချင်းမှာ သိပ်ကြာကြာ မနစ်မျောလိုက်ပါဘူး၊ “ဖုန်း .. ခွပ် .. အင့်” ဆိုတဲ့ အသံနဲ့အတူ ဘိုဘိုရဲ့ တကိုယ်လုံး ကျနော့်အပေါ် ပုံကျလာပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ သူ သီချင်းဆိုတဲ့အချိန်မှာ အင်မတန် လက်ယဉ် သွေးဆာတတ်တဲ့ လက်သီးဆိုတဲ့ နောက်တန်း လုံခြုံရေးတာဝန်ကျ တယောက်ဟာ အရက်မူးဝင်လာပြီး သီချင်းဆိုနေတဲ့ ဘိုဘို့မျက်နှာကို စစ်ဘိနပ်နဲ့ ဆောင့်ကန်ချလိုက်လို့ပါ။ ပြီးတော့ ပြန်ထခိုင်းပါတယ်။ ထောက်လှမ်းရေးက လူပါးဝလို့ ကျောင်းသားတော်လှန်ရေးသီချင်း ဆိုရကောင်းလားဆိုပြီး ပါလာတဲ့ M22 မောင်းပြန်သေနတ်ဒင်နဲ့ ခေါင်းကို ရိုက်ချလိုက်တဲ့ အခေါက်မှာတော့ ဘိုဘို့ခေါင်းက သွေးတွေ ကျနော် မျက်နှာပေါ်ကို ပေါက်ပေါက် ပေါက်ပေါက် ကျလာပါတယ်။ အဲဒီမှာ မရပ်သေးဘဲ ပြန်ထခိုင်းလိုက် ရိုက်ချလိုက်နဲ့ အကြိမ်ကြိမ် ထင်တိုင်းကြဲနေပါတော့တယ်။
ဒီဘိုဘို (ခေါ်) မိုးကျော်သူဟာ ၁၉၉၈ ခုနှစ် ကျနော်နဲ့အတူ စစ်အစိုးရက ဖမ်းဆီးထောင်ချတဲ့အထဲမှာ အမှုတွဲဖြစ်ပြီး ကျနော်တို့က ၅ ည နဲ့ ၇ နှစ်သာ ကျပေမယ့် မိုးကျော်သူကို ၁၂၂ ပုဒ်မနဲ့ နှစ်နှစ်ဆယ် ချလိုက်ပါတယ်။ မန်းထောင်ရဲ့ ညချမ်းဂီတ ဆည်းဆာတွေဆိုရင် အမြဲပွဲတောင်းခံရပြီး မကြခဏ “ပျံသာပျံပါ ခွပ်ဒေါင်းနီ” သီချင်းကို ဆိုလေ့ရှိပါတယ်။
“အဟီး … ကျနော်ပဲပေါ့” … တဲ့။
လူငယ် ပြောလေ့ရှိတဲ့ စကားနဲ့ပြောရင်တော့ “အင်း… မနိုင်ပါလား” လို့ တွေးမိပါတယ်။
Source: (http://www.kaungkin.com မှ …) But copied from Dr Loon Swe’s blog
Tags: All Burma Students' Democratic Front, Burma
This entry was posted on December 26, 2011 at 9:54 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
4 Responses to “ABSDF (NB) Killing Field : ကျနော် လူကက်ဆက် ပန်းချီ ထိန်လင်း”
Trust story is told. Justice Prevails!-ဂျိမ်းဖော်မြေက အညတရ သူရဲကောင်းတွေ၏ အရိုးတွန်သံများ.
by FB of Udp Myanmar on Monday, December 26, 2011 at 7:43am
အညတရ သူရဲကောင်းတွေ၏ အရိုးတွန်သံများ
မြန်မာပြည်မှာ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ တိုးတက်မှုတွေ လမ်းစပေါ်လာသလို တဖက်နဲ.တဖက် ရှိခဲ့တဲ့ ရန်စည်းတွေလဲ ပြိုလာပြီ ဖြစ်တာကြောင့် လူမသိ သူမသိနဲ. ဘ၀ပေးသွားတဲ့ အညတရ တွေ၏ ဘ၀တွေ မှတ်တမ်းတွေ ဇာတ်လမ်းတွေကိုလဲ အောက်မေ့သတိရပြီး အမျှဝေဖို. လိုပါ သည်။
အခုတလော ဖတ်ရသူတိုင်း သိရသူတိုင်း စိတ်နှလုံး ယူကျုံးမရဖြစ်ရတဲ့ အဖြစ်အပျက်ကတော့ ကချင်ပြည်နယ်မှာ ABSDF (မြောက်ပိုင်း)က ခေါင်းဆောင်တွေ၏ ခေါင်းဖြတ် အသတ်ခံရတဲ့ ကျောင်းသားတပ်မတော်က အညတရ သူရဲကောင်းတွေ၏ အဖြစ်အပျက် ရင်နစ်ဖွယ်ဇာတ် လမ်းတွေပါ။ ကျောင်းသားအချင်းချင်း ဇာတ်တူသား စာပြီး မတရား ဖမ်းဆီး နှိပ်စက် အနိုင် ကျင့်ပြီး အကျဉ်းချုံးစစ်ဆေးပြီး ကွက်မျက်လိုက်တဲ့ တောတွင်း လူသတ်မှု (သို.) Jungle Justice အကြောင်းတွေပါ။ ရန်သူကို သတ်တာထက် အချင်းချင်း ပြန်သတ်ဖို.ဆိုတာ ပိုပြီး ရက်စက်မှ လက်ရဲဇက်ရဲရှိမှ လုပ်ရဲနိုင်တာပါ။ လူသတ်တာဟာ အတော် မလွယ်တာမို. အချင်းချင်းကို ပြန်သတ်ဖို.ဆိုတာ ပိုတောင် ခက်ခဲတဲ့ အလုပ်ပါ။ ဒါပေမယ့် ABSDF အဖွဲ.က ခေါင်းဆောင်တချို. ဒီပစ်မှုကို ကျူးလွန်ခဲ့ပါသည်။
တောထဲမှာ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ.တွေ၏ Rule of law ဆိုတာ Gun သေနတ်ကို ဆိုလိုတဲ့သဘောပါ။ ဒါဟာ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ခေါင်းဆောင် မော်စတုန်း၏ အာဏာဆိုတာ သေနတ်ပြောင်းဝက လာတယ်- Power comes from Gun ဆိုတဲ့ ပြောဆိုချက်နဲ. နဲနဲဆင်သလိုလို ဖြစ်နေ ပါသည်။ ကချင်ဒေသမှာ ကျောင်းသားတွေ အချင်းချင်း သတ်တဲ့ကိစ္စ ကို ပြောတိုင်း ကြားတိုင်း ဖတ်ရတိုင်း မြန်မာလူထုအတွက် ဗကပ တွေ၏ ဖြုတ်ထုတ်သတ် အကြောင်းတွေကို ချက်ခြင်း သတိတရဖြစ်ပြီး အော် ဒီလူတွေလဲ ဗကပတွေလိုပဲ ဖြုတ်ထုတ် သတ်တွေ လုပ်ခဲ့တာပါလားဆိုတဲ့ အတွေးနဲ.အတူ ရွံရှာမှုတွေ ခံစားသွားစေပါသည်။
ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သွား အချင်းချင်း ကျောင်းသားတွေ အချင်းချင်း တူပေမည့် စစ်တပ်နှင့် စစ်အစိုးရ၏ နှိပ်စက်မှုတွေ စစ်ထောက်လှမ်းရေးတွေ၏ လက်ချက်နဲ. ကျဆုံးသွားတဲ့ ကျောင်း သား။သူတွေ ဆိုရင် အတိုက်အခံတွေအကြားမှာ မှတ်တမ်း မှတ်ရာ ကောင်းကောင်းနဲ. လူသိ ရှင်ကြား ဖော်ထုတ်ကာ ဂုဏ်ပြုခံရ။ အမှတ်တရတွေလုပ်ပြီး ရည်းစူးကာ အမျှဝေတာတွေ လုပ် ကျပါသည်။ သတင်းစာ ဆရာကြီး ဦးတင်ဝင်ဆိုရင် စစ်အစိုးရ၏ ထောင်းတွင်း အတွေ.အကြုံ တွေ စစ်ကြောရေးစခန်းက ထောက်လှမ်းရေးတွေ၏ လုပ်ရပ်တွေကို ‘ နင့်လားဟဲ့ လူ.ငရဲ“ ဆိုပြီး စာအုပ်စာတမ်းအဖြစ်တောင် ထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်။
ဒါပေမယ့် တောတွင်းမှာ ကိုယ့်အချင်းချင်း ထောက်လှမ်းရေး သူလျိုတွေ Spy တွေလို. စွပ်စွဲ ချက်နဲ. လူမသိ သူမသိ အသတ်ခံရ။ ခေါင်းဖြတ်ခံရ။ အာသံကုန်းတို. ကျွန်းပင်အောက်တို. ရောက်သွားသူတွေအတွက်ကျတော့ ပိုပြီး ရင်နာစရာပါ။ စစ်တပ်နဲ. အစိုးရ လက်ချက်ကြောင့် ဆိုရင် သူရဲကောင်းအဖြစ်ရော နိုင်ငံရေးအရ ထောက်စရာ တိုက်ကွက်တခုအရပါ လူသိအောင် ဖော်ထုတ်ပြီး ဂုဏ်ပြုတာ ပြောဆိုတာတွေ ရှိသော်လဲ တောထဲမှာ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ.တွေ၏ လက်ချက်ကြောင့် ကျောင်းသားအချင်းချင်း နေရာလုပြီး သတ်ပစ်လိုက်တဲ့ လူပျောက်သွားတဲ့ ကျောင်းသားတွေ ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားတွေ၏ ဖြစ်ရပ်တွေကိုကျတော့ သိတဲ့သူတွေက လဲ ရေငုံနှုတ်ပိတ်တာ မဟုတ်ရင် ကိုယ့်ဖက် သေနပ်ပြောင်းဝ လှည့်လာမှာ (သို.) နိုင်ငံရေး အရ ထိခိုက်မှာ စတဲ့ စတဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေကြောင့် ရေးသား ထုတ်ဖော်တာ ဂုဏ်ပြု မှတ်တမ်း တင်တာ မရှိသလောက် ရှားပါသည်။
အဲဒီကျဆုံးသွားတဲ့ ကျောင်းသားတွေ ဒီမိုကရေစီ ဘက်တော်သားတွေ၏ မိသားစု ဘ၀တွေက ပိုပြီးတောင် သနားဖို. ကောင်းပါသည်။ မိသားစုဝင် သားသမီးတွေ ဆုံးရှုံးရတာခြင်းအတူတူ အစိုးရနဲ. စစ်တပ်၏ လက်ချက်ဆိုရင် သူရဲကောင်းတဦးလို ဂုဏ်ပြုတာ ခံရပြီး တောထဲမှာ အချင်းချင်းဇာတ်တူသား စားလို. အသတ်ခံလိုက်ရပြီဆိုရင်တော့ သူရဲကောင်းအဖြစ် လူသိ ရှင်ကြား အတိုက်အခံတွေ ကြားမှာတောင် ဂုဏ်ပြုချီးမြောက်တာ မခံရတဲ့အပြင် ပိုပြီး တောင် မထင်မရှားနဲ. သတင်းအချက်အလက်တွေပါ ပျောက်သွားတတ်ပါသည်။ အစိုးရကို ကြောက်ရ တာက တပိုင်း လူသတ်တဲ့အုပ်စုတွေက တောထဲမှာ အားကောင်းတာက တပိုင်းဆိုတော့ ကိုယ့် ရင်သွေး သားသမီးတွေ ဘ၀ပေး အသက်ပျောက်သွားတဲ့ကိစ္စကိုတောင် ဗြောင် မေးဖို. စုံစမ်းဖို. မလွယ်ပါ။ တဖက်မှာလဲ အစိုးရကိုလဲ ကြောက်ရ။ တခြားတဖက်မှာလဲ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ.တွေက လူသတ်မှုတွေ အစ ပေါ်မှာကို မလိုချင်တော့ လက်စဖျောက်ဖို. ကိုယ်က လိုက်ပြီး စုံစမ်းရင်တောင် နှုတ်ပိတ်သွားအောင် ရန်ပြုမှာ အသက်ကို ထပ်ပြီး ရန်ရှာမှာကို ကြောက်ရပြီး ငိုကြေး ၀မ်းနည်းကြေကွဲတာတောင် ဘယ်သူမှ မသိအောင် အားပေးသူမရှိ ပိုပြီး လူမသိ သူမသိ တိတ်တိတ်ပုန်း ငိုခဲ့ရတဲ့ မိသားစုတွေပါ။
စစ်တပ်ကြောင့်ဆိုရင် ငါတို. သားသမီးဟာ ဒီမိုကရေစီအတွက် လူ.အခွင့်အရေးအတွက် ဘ၀ပေး အသက်ပေးပြီး တိုက်ပွဲဝင်သွားတဲ့ သူရဲကောင်းဆိုပြီး ရင်ကော့ ခေါင်းမော့ ပြောရဲသော်လဲ တောထဲမှာ အချင်းချင်း သတ်လို. သေသွားပြီဆိုရင်တော့ ဘယ်သူကိုမှ ထုတ်မပြောရဲ အသိမပေးရဲပဲ ဂုဏ် မျက်နှာငြိုးငယ်စွာဖြင့် အိမ်တွင်းပုန်း ကျိတ်ပြီး မျက်ရည် ကျရတဲ့ ဘ၀တွေပါ။ ဒီဘ၀မျိုး ဖြတ်သန်းရတဲ့ မိသားစုတွေ အသိဆုံးပါ။ ဒီဘ၀ကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ရ တဲ့ အမေတွေ အသိဆုံးပါ။
အခုတော့ အဲဒီလို အညတရ သူရဲကောင်းတွေ၏ ယုံကြည်ချက် အမှန်တရားတွေကြောင့်လား သစ္စာစကားတွေကြောင့်လား အခုလို ဒီမိုကရေစီ အာရုံဦးကာလမှာ တောထဲမှာ ကျဆုံးသွားတဲ့ အထူးသဖြင့် အချင်းချင်း အသတ်ခံလိုက်ရတဲ့ အညတရတွေ၏ အရိုးတွန်သံတွေ အချိန်မှီ ထွက်ပေါ်လာပါသည်။ အဲဒီ တောတွင်း လူသတ်မှုတွေ ခေါင်းဖြတ်မှုတွေ အုပ်စုဖွဲ. အနိုင်ကျင့်မှု တွေကို ဖော်ထုတ်ပြီး အမှန်တရားအတွက် ပြည်သူနှင့် ကမ္ဘာသိအောင် လုပ်ဖို. အားပေးသူ တွေ အများအပြား ပေါ်ထွက်လာပါသည်။ အရိုးတွေ စွေးပေမည့် အမှု မစွေးဖူးဆိုတဲ့ မြန်မာ့ စကားပုံအတိုင်း အမှန်တရားကို လိုလားတဲ့ ပြည်သူတွေ၏ တောင်းဆိုမှုတွေ ဆူညံလာပါ သည်။
အခုလို အမှန်တရားအတွက် ထုတ်ဖော်တာကိုတောင် တချို. ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့ သူတွေဟာ ဖော်ကောင်တွေ ဖော်ကောင်တွေ။ သတ်ကွင်းမရှိလို.။ သတ်ကွင်းနဲ. မနီးလို. ပေါ့ ဆိုပြီး နောက်ထပ် ထပ်ပြီး လူသတ်ဖို. တွေးနေ ငြိုးတေးသူတွေ၏ အသံတွေကို ကြားရပြန်ပါ သည်။ စဉ်းစားတာကြည့်ပါ အခုလို ကျည်လွတ်ရာမှာတောင် အနည်းဆုံး စိတ်ကူးနဲ. လူသတ် ဖို. စဉ်းစားနေတယ် သတ်ကွင်းကို တွေးနေရင် တောထဲမှာသာ (သို.) သူတို.အုပ်စု ကြီးစိုးတဲ့ နေရာမှာသာဆိုရင် ဘယ်လို လုပ်မလဲ။
နောက်တခုက အရင်ကဆိုရင် အမှန်တရားအတွက် ဆိုပြီး အသေးအမွှားကိစ္စလေးတွေမှာတောင် ၀င်ဝင်ပြီး ပြောကြရေးကျ သဘောထားတွေ မှတ်ချက်တွေ ပေးကြတဲ့ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင်တွေ ဖိုးပြောချင်တွေ အခု ဒီကိစ္စမှာကျတော့ ယုန်ကလေးတွေ နှာစေးပြီး မသိချင်ယောင်ဆောင်ကာ ခေါင်းရှောင်နေတာ စဉ်းစားစရာပါ။ ပြည်သူတွေအတွက် ဒီလူတွေပြောတဲ့အမှန်တရားနဲ. ဒီမိုကရေစီစံတွေကို ဘယ်လောက်အထိ လေးစားသလဲ အမှန်တရားဖက်က တကယ် ရပ်တည်ရဲသလားဆိုတာ မှတ်ကျောက်တင်ခွင့် သိခွင့်ရရှိပါသည်။ လူငယ်အများစု စိတ်ထဲမှာ ဒီလူတွေဟာ သူတို.ပြောပြောနေတဲ့ စစ်ခေါင်း ဆောင်တွေနဲ.ရော ဘာများ ကွဲပြားခြားနားလို.လဲ။ စိတ်ဓာတ်တွေက အတူတူပဲ လို. ကောက် ချက် ချစရာ ဖြစ်လာပါသည်။ လူထုကို ညာဖို. ငြိမ်းခြောက်ဖို. မလုပ်ပါနဲ.။ ပြည်သူတွေ စာ တတ်ကုန်ပြီ။ လူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေ မျက်စိပွင့်ကုန်ပြီ။
ဒီလို တောထဲမှာ လူမသိ သူမသိ ကျဆုံးသွားတဲ့ အညတရ သူရဲကောင်းတွေ၏ အရိုးတွန်းသံ တွေနဲ. အမှန်တရားအတွက် အားပေး ထောက်ခံတဲ့ ပြည်သူတွေ၏ အသံတွေဟာ လူသတ် သမားတွေအတိုက်တော့ အိပ်မက်ဆိုးတွေ ပြန်ပြီး မက်လာရပြီ ထင်ပါသည်။ ဒီအရိုးတွန်သံ တွေဟာ အဲဒီ လူသတ်တရားခံတွေအတွက်တော့ တရားရုံးထဲက တရားသူကြီး ကိုင်တဲ့ အမိန်. ချတဲ့အခါသုံးတဲ့ လက်ကိုင်သစ်သားတုံးလေး၏ ထု လိုက်တဲ့အသံတွေလို ကြားယောင်နေမည် ဖြစ်ပါသည်။ ထောင်တွင်းက “နင်လားဟဲ့ လူငရဲ” ဆိုသလိုပဲ တောတွင်းက “နင်လားဟဲ့ လူ.ဂျပိုး” ဆိုတဲ့ မှတ်တမ်းတွေလဲ မကြာခင် ထွက်ပေါ်လာမည် ဖြစ်ပါသည်။ တောထဲမှာ ကျ ဆုံးသွားတဲ့ အညတရ သူရဲကောင်းတွေ၏ ဘ၀တွေကို ပြည်သူတွေ သိရှိလာပြီး ဒီမိုကရေစီ ရရင် သူတို.အတွက် အမျှဝေမည့်သူတွေ တိုးလာပြီး အဲဒီ အညတရတွေ၏ သမိုင်းဖြစ်ရပ်မှန် တွေကို အရေးလုပ်ပြီး ရေးကျ ပြောကျ မှတ်တမ်းတင်တဲ့သူတွေ များလာနေပါသည်။ ကျဆုံး သွားတဲ့ အညတရ သူရဲကောင်းတွေ ကောင်းရာ သုဂတိလားပါစေ။
Trust story is Spoken. Justice Prevails!
အသေးစိတ် သိရလေ ပိုပြီး စ်ိတ်ခြောက်ခြားစရာတွေပဲ။ ဒါတွေကလဲ အမှန်တွေ ဖြစ်နေပြန်တယ်။သတ်တာကလဲ တကယ် ကို ရက်ရက် စက်စက်နဲ. လက်ဖြတ် ခြေဖြတ် ခေါင်းဖြတ် ပေါင်းသား ကပ်လှီးပြီး အရက်နဲ. မြီးကျနဲ.။ တကယ့် သားသတ်တဲ့ပွဲတွေပါလား။ ပန်းထွက်တဲ့ သွေးစိမ်းရှင်ရှင် တွေကို သောက်ခို်င်း။ မြိုချ ခိုင်းတာ။ သတ်လို. ခေါင်းပြတ်နေတဲ့အလောင်းကို​ နောက်ထပ် အသတ်ခံ ရမည့်သူ အမျိုးသမီးကျောင်းသူ ကိုပါ ယောင်္ကျာXXXကိုပါ လူရှေ.သူရှေ. စုပ်ခိုင်းပြီးတော့မှ အဲဒီ ကလေးမ ကိုပါ သတ်ပစ်တယ်ဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေမှ ဟုတ်ရဲ့လား။ လူတွေမှာ ဟုတ်ရဲ့လား။ အခုတော့ ဒီမိုကရေစီနဲ. လူ.အခွင့်အရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေပါတယ်ဆိုတဲ့​ ခွပ်ဒေါင်းကျောင်းသားတွေ ကျောင်းသားတပ်ဖွဲ.၏ ခေါင်းဆောင်တွေ ဖြစ်နေတော့——- အတော် လန်.စရာ ခြောက်ခြားစရာ တွေပါ။
အနားမှာ ရှိနေတဲ့ ကျန်တဲ့သူတွေကရော ဒီလောက်အထိ ပက်ပက်စက်စက်နဲ. ရက်စက်မှုတွေ ဖြစ်နေ တာ ဒီလိုတော့ မလုပ်ပါနဲ.လို. ၀င်မပြောရဲတာလဲ။ KIA ၏ ဌာနချုပ်အတွင်းမှာ ဒီလောက်အထိ လူသတ်မှုတွေ ဖြစ်နေတာ KIA ခေါင်းဆောင်တွေရော ဒီသတင်းတွေ မကြားဖူးလား။ မသိကြဘူးတဲ့ လား။ မေးစရာပါ။
ကျောင်းသားတွေဟာ လူတွေကို ခေါင်းဖြတ်သတ် သွေးအေးအေးနဲ. သတ်တဲ့အပြင် တကယ်ကို လူသားပါ စားတဲ့သူတွေ ဆိုတာအမှန်ကို အမှန်တိုင်းပဲ လက်ခံပြီး ဘက်လိုက်မှု မရှိပဲ နိုင်ငံရေး အစွဲ မထားပဲ လူထု မျက်နှာနဲ. လူထုကို ရေရှည် အကျိုးပြုမည့် အရာကိုပဲ အားပေးရမည်။ ကိုယ့်နဲ.
မတွေ.လို. ၀င်ပြီး ဗျင်းတာမျိုး ကိုယ်မကြိုက်လို. အဆင်း ဘီးလိမ့်တာမျိုးလဲ မဖြစ်သင့်သလိုဘာကြောင့် ညာကြောင့်ဆိုပြီး အမှန်တရားတွေကို ဖုံးကွယ်တာ ထိန်ချန်တာမျိုးလဲ မဖြစ်သင့်ဘူးဘယ်လိုနေရာမှာ​ပဲဖြစ်ဖြစ် စစ်တပ်ထဲ။ ထောင်ထဲမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် တောထဲမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် လူတွေကို အကျဉ်းချုံးသတ်တဲ့ ရာဇ၀တ်မှုတွေ အဓမ္မ ကျင့်မှုတွေဟာ တချိန်ချိန်မှာတော့ စိတ်ကွယ်ရာမရှိ ပြန်ပေါ်လာမယ်ဒီအသိတွေ များများရှိလေ တဦးချင်းစီကဒါမျိုး ပြစ်မှုတွေကို မလုပ်မိအောင် မမှားမိအောင် ဆင်ခြင် စိတ်တွေ ဖြစ်မယ်ဆိုရင် နောက်ထပ် လူပေါင်းများစွာ အသက်တွေလဲ ကယ်ဆယ်ရာ ကာကွယ်ရ ရမယ်လေ။ Know your Rights, Use whatever resource you have or available, Keep all record.
ဒီလို လူမဆန်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေ ဖတ်လိုက်ရတော့ …. တော်တော် အံ့သြ တုန်လှုပ် ခြောက်ခြားမိသွားတယ် … အဲဒီကောင်တွေဟာ လူစိတ်ပျောက်နေတဲ့ သွေးဆာနေတဲ့ အရိုင်းအစိုင်း တွေပါလားလို့ … ဒါတောင် အဲဒီအဖြစ်အပျက် အကုန်လုံး အသေးစိတ် မသိရသေးဘူး … တစိတ်တပိုင်းလောက်တင် အဲဒီလောက်ဆိုးဝါးနေတာ တခုလုံးဆိုရင်တော့ … မတွေးရဲစရာဘဲ … ဒီ အဖြစ်မှန်ကို သိသူ မြင်သူတွေ ဖေါ်ထုတ်ရေးကြပါ … ဒါဖျောက်ဖျက်ပစ်လို့ မရတဲ့ သမိုင်းတခုပဲ …. မှားယွင်းတာ မဟုတ်တာ လုပ်ခဲ့လို့ ဖုံးကွယ်လို့ မရပါဘူး … ညှင်းပမ်း စွတ်ဆွဲပြီး စတေးခံရတဲ့ ရဲဘော်တွေ အရိုးတွန်ချိန်ရောက်ပါပြီ …. ဖမ်းဆီး နှိပ်စက်ခံခဲ့ရတဲ့သူတွေ အဲဒီအဖြစ်အပျက်မှာ တိုက်ရိုက်မပတ်သက်ပေမဲ့ မျက်မြင်အနေနဲ့ ဖြစ်ဖြစ် အဲဒီစခန်း နယ်မြေမှာရှိကြတဲ့ မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့ဝင်ဟောင်း​ သက်ရှိထင်ရှား ရှိနေကြပါတယ် ဖေါ်ထုတ်ကြပါလို့ တိုက်တွန်းပါတယ် …. ဒေါက်တာနိုင်အောင် … ရော်နယ်အောင်နိုင် ဆိုတဲ့ အောင်နိုင်လေး … နောက် အဲဒီ လူမဆန်စွာ သတ်ဖြတ်မှုမှာ ပါခဲ့တဲ့ကောင်တွေ မင်းတို့ …. ဘယ်လိုပြန်ဖြေရှင်းမလဲ … သိချင်တယ် … သမိုင်းကို လိမ်လို့မရဘူး … အဲဒီ အတွက် ထိုက်တန်တဲ့ ပြန်ပေးဆပ်မှုတခုကို ကျူးလွန်ခံသူတွေ ခံကြရလိမ့်မယ် …. ရန်သူစပိုင် အမှန်တကယ် ဟုတ်ခဲ့ရင်တောင် ဖြစ်နေခဲ့ရင်တောင် … အဲဒီလို လူမဆန်စွာ ညှင်းပမ်းဖို့ သင့်လားဆိုတာ ဦးနှောက်အသိဥာဏ် ရှိတဲ့ လူသားပီသစွာ စာနာတတ်တဲ့ လူတိုင်းသိတယ် ……
ကချင်ပြည်နယ်ထဲ ABSDF (မြောက်ပိုင်း)က ခေါင်းဆောင်တွေ၏ အချင်းချင်း သတ်ဖြတ်တဲ့ လူသတ်မှု ခေါင်းဖြတ်မှုတွေဟာ သာမန် ရာဇ၀တ်မှုတခုမဟုတ်ပဲ ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားတွေ ကျောင်းသားတွေ တော်လှန်ရေးသမား နိုင်ငံရေးသမား နဲ. အမှန်တရားကို လေးစားမြတ်နိုးပါတယ်ဆိုတဲ့ လူအခွင့်အရေးကို တန်ဘိုးထားပါတယ်ဆိုတဲ့ အဖွဲ.တိုင်း။ လူတိုင်း တဦးချင်းစီအတွက်ပါ ဘယ်လောက်အထိ လက်တွေ.မှာ အမှန်တရားကို လေးစားတန်ဘိုးထားသလဲ Justice နဲ. တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအပေါ် တကယ် ယုံကြည်လက်ခံသူဖြစ်သလဲဆို​တာ မှတ်ကျောက်တင် စစ်ဆေးမည့် Honest Testing ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာပြည်မက တကမ္ဘာလုံးကို လည့်ပတ်နေပြီး အမှန်တရား၏ ဘက်တော်သားတွေ တရားမျှတမှုအတွက် တိုက်ပွဲဝင်သူတွေ လူအခွင့်ရေးနှင့် ဥပဒေစိုးမိုးရေး၏ ဘက်တော်သားတွေအဖြစ် ကိုယ့်ကိုယ်ကို နာမည်ခံပြီး အသံကျယ်ကျယ်နဲ. အော်ခဲ့သူတိုင်း အခု ကချင်က ကျောင်းသားတွေကို သတ်တဲ့ လူသတ်မှု ခေါင်းဖြတ်မှုဟာ တဦးချင်းစီအတွက် မေးခွန်းထုတ် စစ်ဆေးပြီး သင် ဘယ်သူလဲ ဘယ် ဘက်မှာ တကယ် ရပ်တည်သူ ယုံကြည်သူ ဖြစ်သလဲဆိုတာ စမ်းသတ်တဲ့ ပွဲပါ။ ဒီမိုကရေစီနှုင့် အမှန်တရားတို. တရားမျှတမှုတို.အတွက် လုပ်နေသူ တို်က်ပွဲဝင်နေသူဆိုတဲ့ အဖွဲ.တွေ နိုင်ငံသမားတဦးချင်းစီ၏ အရေခြုံထားမှုတွေကို ခွာချပြမည့် အဖြစ်အပျက်တွေပါ။ တကယ်ပဲ အမှန်တရားဖက်က ရပ်တည်သူတွေလား သို.မဟုတ် သူတို. ပြောပြောနေတဲ့ အာဏာရှင်တွေ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေ စစ်ထောက်လှမ်းရေးတွေလိုပဲ ရက်စက် ယုတ်မာတဲ့ လူရမ်းကားတွေနဲ. တစ်တန်းစားပဲ အတူတူပဲဆိုတာ ပေါ်လာမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဒီမိုကရေစီ အာရုံဦးမှာ အခုလို ဒီလူသတ်မှုကြီး လူသိထင်းရှား ဖြစ်လာခြင်းကြောင့် ပြည်သူတွေ အမှန်တရားကို သိပြီး ဘယ် ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ.တွေ ဘယ်နိုင်ငံရေးသမားတွေဟာ တကယ့် အမှန်တရားနဲ. တရားမျှတမှု၏ Agent of Justice or Agent of true ဆိုတာ လက်တွေ. သိခွင့် ရလိုက်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာ ကချင်းပြည်နယ်မှာ လူမသိ သူမသိ ကျဆုံးသွားတဲ့ အညတရ သူရဲကောင်းတွေက သူတို.ဘ၀နဲ.ရင်းပြီး ပြည်သူတွေကို ထပ်ပြီး ပေးလိုက်တဲ့ အသိတရားတွေပါ။ မဟုတ်ရင် အုတ်ရောရော ကျောက်ရောရောနဲ. အားလုံးက အမှန်တရားနဲ. တရားမျှတမှုရဲ့ သူရဲခေါင်းတွေအဖြစ် မျက်နှာဖုံးတွေ ဖုံးထားမည် ဖြစ်ပါသည်။ အခုတော့ ကချင်ပြည်နယ်က ကျဆုံးသွားသူ အညတရ သူရဲကောင်းတွေက ထပ်ပြီးတော့ ဘယ်သူတွေဟာ တကယ့် အမှန်တရား မြတ်နိုးသူ။ ဘယ်သူတွေက တကယ့် တရားမျှတမှု၏ ခေါင်းဆောင် အတုနဲ.အစစ်ကို ပြည်သူတွေ သိဖို. ထပ်ပြီး မျက်နှာဖုံးတွေ ချွတ်ပြ ပေးလိုက်သလိုပါ။ ကျဆုံးတာ အနှစ် ၂၀ ရှိနေတာတောင် အခုအထိ ပြည်သူတွေအတွက် ကြီးမားတဲ့ အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ အသိတွေ သတိတွေရှိဖို. ပေးဆပ်နေသူတွေပါ။ အမှန်တရားနဲ. တရားမျှတမှုကို အော်နေတဲ့သူတွေ ဒီလူသတ်မှုမှာ ဘယ်လို အော်မလို ဘယ်လို ရပ်တည်မလဲ ပိုပြီး ကွဲပြားလာမည် ဖြစ်ပါသည်။